ဆိုဒ်5ခုကိုနေ့စဉ်ကလစ်ပြီး 1 ဒေါ်လာရယူလိုက်ပါ ~ ဗိုလ်လှိုင်း (ဆိပ်ဖြူသားလေး)
Home » အွန်လိုင်းငွေရှာနည်းများ » ဆိုဒ်5ခုကိုနေ့စဉ်ကလစ်ပြီး 1 ဒေါ်လာရယူလိုက်ပါ
special promotion အနေနဲ့ ကျနော် မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ ဆိုဒ်5ခုမှာ ကျနော့ပေးထားတဲ့လင့်ကနေ မန်ဘာဝင်ပြီး 1 လ တိတိ နေ့တိုင်းကလစ်မယ့်သူကို 1 လပြည့်တာနဲ့ ကျနော်က
1 $ ပေးပါမယ့်။သင့်ရဲ့ paypal အကောင့်ထဲကို လွှဲပေးမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ မန်ဘာဝင်ရမယ့် လင့်တွေကတော့
ဆိုဒ်5ခုကိုနေ့စဉ်ကလစ်ပြီး 1 ဒေါ်လာရယူလိုက်ပါ။ပေးတဲ့နေရာမှာ စည်းကမ်းချက်လေး နဲနဲတော့ ရှိပါတယ်။
1. ဆိုဒ်5ခုမှာ 1 လပြည့်အောင် နေ့တိုင်းကလစ်ပေးရပါမယ်။နေ့တိုင်း ကလစ်တယ်
မကလစ်ဘူးဆိုတာ ကျနော့လင့် ကနေ၀င်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျနော် က သိရပါတယ်။
2. ဆိုဒ် တစ်ခုမှာ 1 ကြိမ်ပျက်ကွက်ရင် 1 မှတ်လျော့ပါမယ်။အကယ်၍သင်က ဆိုဒ်5ခုကို
တရက်မကလစ်ဘူးဆိုရင်တော့5ကြိမ်ပျက်ကွက်တာဖြစ်တဲ့ အတွက်5မှတ်လျော့ပါမယ်။1 မှတ်ကို
3. 1 လလုံးမှာ 1 ကြိမ်တည်းပျက်ကွက်တယ်ဆိုရင်တော့
change ပေးတဲ့အနေနဲ့ 1 $ လုံးအပြည့်ပေးပါ့မယ်။1 ကြိမ်ထက်ပိုရင်တော့ change
မရှိပါ။လျော့တဲ့ အမှတ်အတိုင်း 1 မှတ်ကို 0.05$ လျော့ပါ့မယ်။
တစ်လပြည့်အောင်ကလစ်ပြီး 1 $ ယူလိုက်ပါ။ကလစ်တဲ့နေရာမှာလဲ 1 ဆိုဒ်ကို 15 မိနစ်ဝန်းကျင်လောက်ကြာပါတယ်။ဒါပေမယ့် ကျနော်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ဆိုဒ်တွေက 1 ဆိုဒ်ချင်းစီကလစ်စရာမလိုပါဘူး။5 ဆိုဒ်လုံး ပြိုင်တူဖွင့်ပြီးကလစ်လို့ရပါတယ်။အဲဒီအတွက်လဲ အချိန်က ပိုမကုန်ပါဘူး။25 မိနစ်လောက်ဆို5ဆိုဒ်လုံးပြီးပါတယ်။အချိန်ကုန်လဲသက်သာတာပေါ့။1 ဆိုဒ်
ကိုထိုင်ကြည့်မနေပါဘူး။အောက်မှာ ကျနော် ကလစ်တဲ့ နည်းလေးကို နမူနာပြထားပါတယ်။လေ့လာကြည့်ပါ။
အဲဒီလိုပုံစံနဲ့ ကျနော် ဆိုဒ် 8 ခုကို တပြိုင်တည်းကလစ်ပါတယ်။တချို့ဆိုဒ်တွေကတော့ 1 ဆိုဒ်တည်းပဲ ဖွင့်ထားပြီးကလစ်ရပါတယ်။ဖွင့်ထားတဲ့ page ကနေ တခြား page ကို ပြောင်းလိုက်တာနဲ့အပေါ်မှာပြေးနေတဲ့ အတန်းလေးက ရပ်နေပါတယ်။အဲဒီ page ကို ကလစ်ပြန်ထောက်မှ ဆက်သွားပါတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်အောင် ဆိုဒ်ကတမင်လုပ်ထားတာပါ။သူပေးထားတဲ့ ကြော်ငြာတွေကို ထိုင်ကြည့်နေအောင်လို့ပါ။အဲလိုဆိုဒ်မျိုးက သူ့ 1 ဆိုဒ်ထဲသီးသန့်ကလစ်ရတဲ့အတွက် အချိန်ကုန်ပါတယ်။PTC ဆိုဒ်တွေထောင်နဲ့ချီရှိတဲ့အတွက် ကျနော်ကတော့ အဲလိုဆိုဒ်မျိုးမှာ ကလစ်ဖို့ အားမပေးချင်ပါဘူး။ကဲ ဒီလောက်ဆို အချိန်ကုန်သက်သာအောင် ကလစ်ရမယ့် နည်းလဲ သိပြီဆိုတော့ 1 ဒေါ်လာအရယူလိုက်ပါ။ခု